Adobe wuxuu soo bandhigay saddexda midab ee isbedelka cimilada | Abuurista khadka tooska ah
Adobe iyo Pantone ayaa isku kaashaday qaabeynta saddexda midab waxa ay yihiin isbedelka cimilada. Iyadoo lala kaashanayo NGO-ga The Ocean Agency (TOA) si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan dhibaatooyinka ba'an ee gacmaha bini'aadamka ku leeyihiin deegaanka, kuwani waa midabada la doortay
Waa saddex midab: Jaale dhalaalaya, buluug dhalaalaya iyo casaan dhalaalaya. Ama muxuu noqon lahaa jaalle, buluug iyo guduud. Seddex midab oo la isku dayay in lagu cambaareeyo xilligan aan ku noolnahay oo ay dowlado badani u eegaan dhinaca kale iyagoo iska ilaalinaya wax macno leh.
Nidaam waara oo lagu arko luminta midabka midabada baddeena si aan uga dhigno mid cad. Midabadaas firfircoon ayaa baaba'aya si ay uga baxaan meelaha dhintay oo noloshu si tartiib tartiib ah ugu tarmeen daqiiqad kasta.
NGO-ga The Ocean Agency ayaa dhowaan ku guuleystey a Emmy iyada documentary "Chasing Coral" iyo in lagu guuleystay in la keeno Google Street View hoostiisa biyaha hoostooda. Dhinaca Adobe, Midab ayaa la isticmaalay si loo xusho seddexdaas midab ee cusub ee aan soo sheegnay.
Wixii Adobe sameeyey ayaa qaata qiyamka nalka gaarka ah ee LAB ee sawirada NGO-yada ku jira Adobe Stock oo u beddelay RGB. Pantone wuxuu mas'uul ka ahaa sameynta palette caadada ah si isbedelka cimilada loogu cambaareeyo seddexdan midab.
Un ka codso dhamaan muwaadiniinta meerahan si ay iyagu iskood isu abaabulaan oo ay tallaabo uga qaadaan arrinta. Ugu yaraan noqo mid feejignaada oo goobjoog ahaada marka ay jiraan dhaqdhaqaaq caalami ah oo lagu curyaaminayo nidaamka hadda jira ee maareeya faqriga deegaankeenna iyo sidoo kale badaha.
Saddex midab oo loo isticmaalo shaqadaada oo sidaas awgeed la iska kaashado wajiga baaqa ka dhanka ah isbedelka cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Kuwani waa midabada isbeddelka cimilada sida ku cad Adobe iyo Pantone